I-Sweet Home Pontevedra - I-Airbnb
I-Sweet Home Pontevedra
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguAntonio
Indlu yosapho, esecaleni kweOfisi Yezokhenketho neemitha eziyi-50 ukusuka ePraza da Verdura, enye yeendawo ezithandwayo ngabantu esixekweni, apho uza kufumana iibhari zebhiya okanye isidlo sangokuhlwa se-tapas kwindawo entle nethuleyo. Le ndlu yakhiwe ngazo zonke izinto ezikumgangatho ophezulu kunye noyilo lwale mihla nolwentsapho. Yindlu efanelekileyo yokuchitha iintsuku ezimbalwa nentsapho okanye abahlobo uze wazi isixeko esihle sasePontevedra kunye neendawo ezijikelezileyo
Yindlu enendawo ekhethekileyo yokungena kwaye inemigangatho emibini. Umphantsi unekhitshi, igumbi lokuhlala, igumbi lokutyela kunye nendlu yangasese. Kumgangatho ongentla kukho amagumbi okulala amathathu namagumbi okuhlambela amabini (elinye lawo likwigumbi lokulala), elinye linebhedi elala abantu ababini, elinye lineebhedi ezimbini elinye linebhedi. Onke amagumbi aneekhabhathi ezinkulu ezakhelwe ngaphakathi
Iziko lezembali lasePontevedra, libhengeze iflethi okanye indlu ekwicomplex enembali ngo-1951, yenye yezona ndawo zigcinwe kakuhle eCcia.
Ubuhle bezitrato zayo kunye nezikwere zenza wonke umntu azityelele, iPlaza de Verdura - apho iimveliso zasemaphandleni zingathengiswa khona kude kube yiminyaka embalwa edlulileyo - iba lelinye lamaziko endawo yokuphola, indawo yokudibana yokufumana izimuncumuncu. I-Plaza de la Leña, apho kwakuthengiswa khona iinkuni ukuze kufudunyezwe amakhitshi, iqokelela uxolo luthathu oluhlala kwiMyuziyam Yephondo, eyaziwa njengenye yeemyuziyam ezimele kakhulu zembali yaseColumbus, izinto zakudala kunye nobugcisa, phezulu kwiziko lezembali, yiPlaza de la Ferraria emangalisayo, apho iingcali zazisebenzela khona. Ngoku likhaya lemiboniso emininzi yesixeko kwaye, phakathi kwezinye izakhiwo, iConvent yaseSan Francisco, kunye neegadi zayo ezintle.
Singathanda ukuba uzive usekhaya, ngoko siza kwenza konke okusemandleni ethu ukuze senze loo nto, siyathemba ukuba uza kuhlala ngale ndlela ubuyilindele ibe uza kuyonwabela iNdlu nePontevedra.
Inombolo yomthetho: VUT-PO-003635